Kooxdayada - Kooxda Istaraatijiyadda Lincoln
La kulankeena KhubaradaXallinta dhibaatadaXeeladoKooxda
NATHAN SPROUL; Aasaasihii & Agaasimihii Maamulka
In ka badan 20 sano oo uu ku jiray saaxadda siyaasadda iyo arrimaha bulshada, Nathan wuxuu maareeyaa hawl maalmeedka kooxda Istaraatiijiyada Lincoln. Akhri wax dheeraad ah...
MEGHAN COX; Is-Aasaasaha & Maamulaha
Meghan waxay kormeertaa ololeyaal ballaaran oo aasaasi ah oo loogu talagalay siyaasadda, ururada ganacsiga iyo macaamiisha shirkadaha. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay khabiir hoggaamineed oo ku saabsan tallaabooyinka iyo dadaallada cod-bixinta. Akhri wax dheeraad ah...
DAN CENTINELLO; Maamule
Dan wuxuu u shaqeeyaa maamule ahaan halkaasoo uu ka maamulo ololeyaal baaxad weyn oo ka socda Mareykanka iyo Yurub oo dhan. Akhri wax dheeraad ah...
CHRISTINE BROWN; VP ee Kheyraadka Aadanaha
Christine waxay la joogtay Lincoln ilaa markii la aasaasay waxayna ka soo shaqaysay kaalmo kala duwan oo HR iyo xisaabaad, fahamka ugu horeya arrimaha muhiimka ah macaamiisha iyo shaqaalaha si isku mid ah. Akhri wax dheeraad ah...
COREY VALE; Ku-Xigeenka Madaxa & Madaxa Istaraatiijiyadda Dijital ah
20-kii sano ee la soo dhaafay, Corey wuxuu ku jiray dhexda kacaanka dijitaalka ah, isaga oo keenaya aragtidiisa iyo qibradiisa. Akhri wax dheeraad ah...
NICOLA IORIZZO; Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga Caalamiga ah
Nicola waxay u shaqeysaa sida Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga Caalamiga waxayna siisaa kormeer dhammaan ololayaasha Lincoln Yurub. Akhri wax dheeraad ah...
JACQUELINE BASULTO; TILMAAMAHA KHATARTA GUUD EE GLOBAL
Jacqueline waa istaraatiijiyad casri ah oo caan ku ah adduunka isla markaana leh khibrad ka shaqeysa siyaasadaha waddamada badan, bulshada, iyo ololayaasha shirkadaha. Akhri wax dheeraad ah...
GIUSEPPE MOLINARI; Lataliyaha Fulinta ee Arimaha Bulshada
Waxay ku saleysantahay Roma, Giuseppe waa la-taliye arrimaha bulshada, oo leh in ka badan labaatan sano oo khibrad leh. Akhri wax dheeraad ah...
XARUNTA KONDERIK; Agaasimaha Mashaariicda
Maaddaama uu yahay Maareyaha Maareynta Mashruuca, Courtney waxay siisaa kormeer dhammaan mashruucyada Lincoln iyo ololaha. Akhri wax dheeraad ah...
MATT COHEN; Agaasimaha Goobta Qaranka
Matt wuxuu u shaqeeyaa sida Agaasimaha Lincoln National Field ee aqoon yahanka u leh geeddi-socodka siyaasadeed iyo waxa ay u baahan tahay si loo abuuro is-dhexgal iyo guul xagga dhulka ah. Akhri wax dheeraad ah...
LISA MASCARO; Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga
Lisa Mascaro waxay in ka badan 10 sano ka shaqeyneysaa siyaasadda, xiriirka macaamiisha iyo xiriirka bulshada dhexdeeda. Maadaama ay tahay Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga ee Lincoln, waxay tilmaamaysaa macaamiisha mustaqbalka iyo adeegyo cusub oo loogu talagalay macaamiisha hadda jirta. Akhri wax dheeraad ah...
Shantal Bottos; Maareeyaha Goobta
Shantal wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa hirgelinta mashruuca Lincoln ee guud ahaan Yurub isagoo maareynaya kooxo badan oo duurka ku jira. Akhri wax dheeraad ah...
JUSTIN RASHIDI; AGAASIMAHA, MASHRUUCYADA DIGITAL EE CAALAMKA
Justin Rashidi wuxuu Master-ka ku yahay nidaamka iyo maareynta mashruuca. Iyadoo taasi jirto, wuxuu keenaa khibradiisa ganacsi iyo tikniyoolajiyada safka hore si loo maareeyo mashaariicaheena caalamiga ah. Akhri wax dheeraad ah...
DEAN KOSTOROWSKI; Agaasimaha Falanqaynta Istiraatiijiyadeed
Dean wuxuu soo saaraa xog iyo faham ganacsi ku saleysan si loo wado istiraatiijiyad iyo go'aan qaadasho ku saleysan xaqiiqada. Akhri wax dheeraad ah...
JERI LYNN ANDRUS; Maareeyaha Bixinta Xisaabaadka
Jeri Lynn waxay maamushaa dhammaan kharashaadka iyo bixinta si loo hubiyo in lacagaha si habsami leh oo habsami leh loo shaqeeyey iyadoo la raacayo habraacyada kontaroolada gudaha. Akhri wax dheeraad ah...
AUSTEN SKILLMAN; Teknolojiyada Macluumaadka
Ayadoo la adeegsanayo ololaha wadista qibradeysan ee dhijitaalka ah qarniga 21aad, xirfadaha Austen ee xalinta dhibaatada iyo xallinta tiro kooban oo ah dhibaatada IT-da ayagoo leh kalsooni waxay taageereysaa maaddada LSG ee ah “guul darradu maaha ikhtiyaar.” Akhri wax dheeraad ah...